Taariikhda maha dhaan iyo Qoraalladiisii ibraahimmagaag samaer
oo lagu soo bandhiga hargaysa dabayaqadee sanadka tagaya dahmaaday
Saddex jeer markii ay ku celiyeen ayaa sanqadhii oo dhami joogsatay. Ka dib Ibraahin Meygaag Samatar ayuu makrifoonkii u dhiibay, annaga oo Ibraahin ku badhi-taageernay in uu baabuurkii “Cresidada” ahaa dusha uga baxo. Sidii ayuu yeelay Ibraahin Meygaag Samatar, dadkiina wuxu ugu ballan-qaaday in Kal-fadhiga Golaha Dhexe hadda fadhiisanayo arrinta madax-bannaanida gobollada woqooyina go’aan dhaxal-gal ah ka gaadhayo.
Sidii ayaa lagu galay madashii Kal-fadhigii taariikhiga ahaa ee SNM ka socday oo Somaliland lagu go’aamiyay.
Ibraahin Meygaag Samatar, naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo innagana samir iyo iimaan ha inaga siiyo e’, wuxu dadka kaga duwanaa in uu ahaa caalim mufakir ah oo aragtii ka lahaa halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta Qaran, la-soo-noqoshadii madax-bannaanidii Somaliland iyo geeddi-socodka dimuqraadiyadeedba. Waxa aan jeclahay in aan qormooyinkan dambe wax kaga taabto laba qoraal oo uu ka tegay oo laba waqti oo kala fog soo kala baxay. Qoraalka hore wuxu soo baxay 1993kii halka qoraalka labaad ee aan halkan ku soo qaadanayaa ka soo baxay bishii Ogos 2010kii.
Waa qoraal (paper) Ibraahin Meygaag Samatar ka jeediyay Shirweynihii Cilmi-baadhista Soomaaliyeed ee lagu qabtay Worcester (Boston) oo dalkaa Maraykanka ku taalla. Aniga oo aan maanta u ambo-bixin in aan idiin wada tarjumo warqaddaasi sidii ay u dhammayd bal haddana aan godollo ka soo qaato si aad ula socotaan fikirkii iyo aragtidii Ibraahin Meygaag Samatar oo aan gole-ka-fuul iyo male-awaal midna ahayn, bal se ahayd cilmi-baadhis qotonkeeda iyo qaradeedaba leh oo uu kaga duwanaa hoggaamiyaashii qaran iyo kuwii xarakadeed ee ummaddan soo marayba.
Bal hadda hordhaca qoraalkan kooban aan ku horreynno oo uu qoray 1993kii oo lagu daabacay buugga la yidhaahdo: “Mending rips on the sky”. “Cir-ku-baanashada biixiyaha burburay.”
Ibraahin Meygaag Samatar maqaalkiisan ama qoraalkiisan wuxu ku suntanayaa: Light at the end of the tunnel: Reflections on the struggle of the Somali National Movement.
Haddii aan is-idhaahdo af-Soomaali u beddel, sidan ayaan u dhigi lahaa: Mugdiga iftiin baa ka danbeeya: Milicsiga halgankii Dhaqdhaqaaqa Waddaniga Soomaaliyeed (SNM). Haddii aan ku hees is-idhaahdo waxaan soo qaadan lahaa: Gabbal dahacaba, waa guduutaa ku xiga.
Ibraahin Meygaag Samatar hor-dhiciisa maqaalkan waxa uu ku yidhi, aniga oo af-Ingiriisi idiin ka soo tarjumay:
“Waxan soo socda ama qoraalkani ma aha ka-sheekaynta hawl-galladii SNM tan iyo maalintii ay bilowday halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta Qaran ee ay kaga soo hor jeedday nidaamkii Siyaad Barre. Qoraalkani haddana ma aha qiimayn cilmiyeed oo aan dhinacna u janjeedhin oo ku saabsan hawl-galladii SNM iyo saamayntii ay ku yeesheen siyaasadda Soomaaliyeed. Qoraalkani ma aha oo kale qeexid iyo kala-dhanbalid nidaamkii Siyaad Barre ah ama qiimaynta doorarkii ay jilayaasha dibadeed (caalamiga ahi) ka ciyaareen qalalaasaha Soomaaliyeed. Intaas oo dhan midna ma aha, haddana qoraalkani waa intaas oo isku wada jirta oo isku dhafan.
Haddana intaas oo dhan midna ma aha, maxaa yeelay mowduucyadaas oo dhan midna waqtigii iyo diraasaddii loo baahnaa ee lagu qeexi lahaa ma siinayo. Geesta kale marka aad iska taagto, qoraalku intaas oo dhanba waa uu yahay maxaa yeelay qalalaasaha Soomaaliyeed si uu u taabtaba waa uu taabanayaa ama wax ayuu uga odhanayaa.”
Ibraaahin Meygaag Samatar intaas hoos ayuu uga sii daddegay, waxaanu yidhi isaga oo qaddimaya qoraalkiisa:
“Qoraalkani sida cinwaankiisu sheegayo, waa milicsiyo (Refelections). Milicsiyaduna sida dabcigooda ama sawracooduba yahay waa wax aan isku xidhnayn oo aan si is-raacsan oo taxane ah u rasaysnayn. Waa wax hore iyo gadaalba u socda oo dhex qaada ama dhex-roor u noqda mowduucyo faro badan oo aan si habaysan looga hadlayn. Sidaa awgeed arrimo badan oo qalalaasaha Soomaaliyeed la xidhiidha ayaa laga hadlayaa. Qardo-jeexyada siyaasadaha caalamiga ah ee Soomaaliya ku wajahan oo ay ku lammaanaayeen bilowyo habowsani ayaa la sharxayaa. Waayo-aragnimada iyo horumarka Jamhuuriyadda Somaliland iyo sida muuqata ee ay uga duwan tahay Soomaaliya ayaa la gorfaynayaa. Marka aan ka beydho ama ka leexdo dhibaatooyinka dhaqaale-siyaasadeed ee Afrika ka aloosan, qiimayn dhab ah ayaan ugu noqonayaa halgankii hubeysnaa ee SNM.”